Izindaba - ukuqamba ngokuhlanganyela nokuhlomisa ngobuchwepheshe bedijithali
Njengamanje, ukuguqulwa kwedijithali sekuyinto evumelana ngamabhizinisi, kepha sibhekene nobuchwepheshe bedijithali obungapheli, indlela yokwenza ubuchwepheshe budlale inzuzo enkulu kakhulu ebhizinisini lebhizinisi yindida nenselelo ebhekene namabhizinisi amaningi. Mayelana nalokhu, ngesikhathi somhlangano wakamuva we-2020 Schneider Electric Innovation Summit, intatheli yaxoxisana noZhang Lei, iphini likamongameli weSchneider Electric kanye nenhloko yebhizinisi lezinsizakalo zedijithali eChina.
UZhang Lei (owokuqala ukusuka kwesobunxele) esithangamini esizungezayo "sokuhlanganiswa kwamasu amasha nokufukulwa kobuchwepheshe bedijithali"
UZhang Lei uthe kwinqubo yenguquko yedijithali, amabhizinisi ajwayele ukubhekana nezinselelo ezintathu ezinkulu. Okokuqala, amabhizinisi amaningi ukuntuleka kokuklanywa kwezinga eliphezulu enqubweni yokuguqulwa kwedijithali, angazi ukuthi kungani kufanele kwenziwe ngekhompyutha, futhi angacabangi ngokugcwele ngokubaluleka kwangempela kweDigitalization yokusebenza kwamabhizinisi. Okwesibili, amabhizinisi amaningi awahlanganisi idatha nezimo zebhizinisi, futhi awasunguli amakhono wokuhlaziya, okwenza idatha ingakwazi ukuba imininingwane esekela ukwenziwa kwezinqumo. Okwesithathu, ilishaya indiva iqiniso lokuthi inqubo yokuguqulwa kwedijithali nayo iyinqubo yokuguqulwa kwenhlangano.
UZhang Lei ukholelwa ukuthi ukuze kuxazululwe ukudideka kwamabhizinisi ekuguqulweni kwedijithali, ngaphezu kobuchwepheshe nekhono ledijithali, futhi kudinga umjikelezo ogcwele nezinsizakalo zedijithali ezihlanjululwe.
Njengebhizinisi eliyinhloko lensizakalo yedijithali, insizakalo yedijithali kaSchneider Electric ikakhulukazi inamazinga amane. Eyokuqala isevisi yokubonisana, esiza amakhasimende ukuthi abone ukuthi adingani nokuthi yiziphi izinkinga ezikhona ebhizinisini lebhizinisi. Okwesibili izinsizakalo zokuhlela umkhiqizo. Kule nsizakalo, uSchneider Electric uzosebenzisana namakhasimende ukuhlela okuqukethwe yisevisi, anqume ukuthi yisiphi isisombululo esifaneleke kunazo zonke, esisebenza kakhulu futhi esimeme kunazo zonke, esiza amakhasimende ukuthi akhethe izixazululo zobuchwepheshe ezingaba khona nezingenzeka, anciphise umjikelezo wesilingo nephutha, futhi anciphise utshalomali olungenasidingo. Okwesithathu insizakalo yekhono lokuhlaziywa kwedatha, esebenzisa ulwazi lobuchwepheshe bochwepheshe bemboni kagesi iSchneider, kuhlanganiswe nedatha yamakhasimende, ngokusebenzisa ukuqonda kwedatha, ukusiza amakhasimende ahlaziye izinkinga. Owesine isevisi esizeni. Isibonelo, nikela ukufakwa kwendlu ngendlu, ukulungisa amaphutha nezinye izinsizakalo ukugcina imishini isesimweni esihle sokusebenza isikhathi eside.
Uma kukhulunywa ngenkonzo esizeni, uZhang Lei ukholelwa ukuthi kubanikezeli bezinsizakalo, ukusiza amakhasimende ukuxazulula izinkinga, kufanele baye kusayithi lekhasimende futhi bathole zonke izinkinga ezikulesi siza, njengezici zemikhiqizo esetshenzisiwe insimu, siyini isakhiwo samandla, futhi yini inqubo yokukhiqiza. Bonke badinga ukuqonda, ukuphatha kahle, ukuthola nokuxazulula izinkinga.
Enqubweni yokusiza amabhizinisi ukuthi enze uguquko lwedijithali, abahlinzeka ngemisebenzi kudingeka babe nokuqonda okuqinile kwezobuchwepheshe nezimo zebhizinisi. Kuze kube manje, abahlinzeka ngemisebenzi kudingeka basebenze kanzima ekwakhiweni kwenhlangano, imodeli yebhizinisi kanye nokuqeqeshwa kwabasebenzi.
“Ohlelweni lukaSchneider Electric, sihlala sisekela futhi siqinisa umgomo wokuhlanganiswa. Uma sibheka noma yikuphi ukwakhiwa kwezakhiwo nobuchwepheshe obusha, sibheka iminyango yamabhizinisi ehlukene ngokubambisana, ”kusho uZhang. Beka imigqa ehlukene yebhizinisi neyomkhiqizo ndawonye ukuze wakhe uhlaka oluphelele, ucabangele zonke izimo. Ngaphezu kwalokho, sibheka futhi ukubaluleka okukhulu ekutshalweni kwabantu, ngethemba lokuguqula wonke umuntu abe ngamathalenta edijithali. Sikhuthaza ozakwethu abenza i-software ne-hardware ukuthi babe nokucabanga kwedijithali. Ngokuqeqeshwa kwethu, incazelo yomkhiqizo ngisho nokuya endaweni yamakhasimende ndawonye, ​​singaqonda izidingo zamakhasimende emkhakheni wedijithali nokuthi ungahlangana kanjani nemikhiqizo yethu ekhona. Singakhuthaza futhi sihlangane nomunye. ”
UZhang Lei uthe ngenkathi kwenziwa uguquko lwedijithali lwamabhizinisi, ukuthi ungazuza kanjani ibhalansi phakathi kwezinzuzo nezindleko kuyinto ebalulekile. Insizakalo ye-Digital akuyona inqubo yesevisi yesikhashana, kepha inqubo yesikhathi eside. Kuhlobene nomjikelezo wempilo wonke wemishini, kusuka eminyakeni emihlanu kuya eminyakeni eyishumi.
“Kusukela kulo mkhakha, yize kuzoba khona ukutshalwa kwemali okuthile onyakeni wokuqala, izinzuzo zizovela kancane kancane kuyo yonke inqubo yokusebenza okuqhubekayo. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwezinzuzo eziqondile, amakhasimende azophinda athole ezinye izinzuzo eziningi. Isibonelo, bangahlola imodeli entsha yebhizinisi ukuguqula kancane kancane ibhizinisi labo lesitoko libe ibhizinisi elikhulayo. Sithole lesi simo ngemuva kokubambisana nozakwethu abaningi. ”Kusho uZhang Lei. (lo mbhalo ukhethwe kwezomnotho nsuku zonke, intatheli u-yuan Yong)